ကားအလုံးစုံ အာမခံကုမ္ပဏီတွေ အပြောလေးတွေ သိပ်ကောင်းကြတယ် အခုတော့ မျက်နှာငယ်စွာဖြင့် ငုတ်တုတ်မေ့ခဲ့ရပြီ - Thadin
Homeကြားသိရသမျှကားအလုံးစုံ အာမခံကုမ္ပဏီတွေ အပြောလေးတွေ သိပ်ကောင်းကြတယ် အခုတော့ မျက်နှာငယ်စွာဖြင့် ငုတ်တုတ်မေ့ခဲ့ရပြီ
ကားအလုံးစုံ အာမခံကုမ္ပဏီတွေ အပြောလေးတွေ သိပ်ကောင်းကြတယ် အခုတော့ မျက်နှာငယ်စွာဖြင့် ငုတ်တုတ်မေ့ခဲ့ရပြီ
February 5, 2019 Admin Kwee ကြားသိရသမျှ Comments Off on ကားအလုံးစုံ အာမခံကုမ္ပဏီတွေ အပြောလေးတွေ သိပ်ကောင်းကြတယ် အခုတော့ မျက်နှာငယ်စွာဖြင့် ငုတ်တုတ်မေ့ခဲ့ရပြီ
အလုံးစုံကားအာမခံကုမ္ပဏီတွေ အပြောလေးတွေသိပ်ကောင်းကြတယ် အာမခံကို မထားထားချင်အောင် အမျိုးမျိုးစကားလုံးတွေရွေးပြီးပြောကြတယ် ကားတစီးလုံး ဘယ်လိုအခြေအနေ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိပျက်စီးပျက်စီး customer ဘက်မှ ဘာမှအာရုံမနောက်ရ ဘာမှမနစ်နာရအောင် စီစဉ်ပေးသတဲ့ အပျက်အစီးတအားဆိုးသွားရင် တစီးလုံးတန်ဖိုးပေါက်ဈေးအတိုင်း ပြန်လျော်ပေးမည်တဲ့ ကြားရတဲ့စကားလေးတွေအားရှိစရာပဲ ဒီလိုစကားလေးတွေကြောင့်လဲ customer ဘက်က တနှစ်ကို အာမခံကြေး ၃၈၅၀၀၀ ပေးနေရလဲ ပျော်ပျော်ပဲ ၁နှစ်ကို ၁၃၆၀၀၀ ပေးနေရခြင်းအတွက်လဲကျေကျေနပ်နပ်ပဲ ပေးတယ်လေ accident ဆိုတာအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ် ဖြစ်ရင်ကိုယ့်ဘက်က နစ်နာမှုမရှိအောင် သူတို့အားလုံးလုပ်ပေးမှာလေ ယုံတယ်လေ အပြောလေးတွေကလဲကောင်းကြတာကို
IKBZ မှာ အလုံးစုံကားအာမခံကြေးသွင်းထားသော ကားတစီးကို ကျမဝယ်ပြီး ၁ လအကြာမှာ ကားaccident ဖြစ်ပြီး ကားက သုံးစားမရအောင်စုတ်ပြတ်သတ်သွားပါတယ် အာမခံသက်တမ်းကကျန်သေးတဲ့အတွက် အာမခံကုမ္ပဏီကို အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့်ဘက်က မလျော်ရဖို့အရေး ရှောင်လင်ကွန်ဖူးထက်ပင်အရှောင်အတိမ်းကောင်းလှသော သိုင်းကွက်များကပြကြပါတယ် ၁ ပတ်အတွင်းအကြောင်းကြားတာမဟုတ်လို့ အကျုံးမဝင်ပါလို့ပြောပါတယ်။
ကျမတို့မှာ accident ဖြစ်ချိန် လင်မယား ၂ယောက်လုံး ဆေးရုံရောက်သွားတယ် နံရိုးကျိုးတော့ ခရီးမထွက်နိုင်ဘူး အာမခံစာရွက်တွေက ရန်ကုန်မှာကျန်ခဲ့တယ် ဒါ့ကြောင့် အချိန်မှီအကြောင်းကြားရန်ပျက်ကွက်ခဲ့မိကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ဒါဆို အသနားခံစာတင်ပါတဲ့ ဒါပေမယ့် ပေးမယ်လို့တော့အာမမခံပါတဲ့။
ဒီအချက်ကိုအဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းရင်ရပြီလားလို့မေးတော့ မရသေးပါတဲ့ အာမခံထားတဲ့လူနာမည်က အရင်လူနာမည်ဖြစ်နေလို့ နောက်ဝယ်တဲ့လူက နာမည်မပြောင်းရသေးလို့ အကျုံးမဝင်ပါတဲ့ ဟာ မဟုတ်သေးဘူးလေ အာမခံသက်တမ်းကျန်နေသေးလို့ကျမမပြောင်းသေးတာလေ ဒီလိုပေါ်လစီရှိတာကျမတို့မသိလို့မပြောင်းခဲ့တာ ကောင်းပြီ ဒါဆို မူရင်းပိုင်ရှင်ကိုဆောင်ရွက်ခိုင်းလိုက်မယ် ဖြစ်မလားဆိုတော့ အဲ့လိုလဲမရပါတဲ့
ရောင်းလိုက်ပြီးသားပစ္စည်းအတွက် မူရင်းပိုင်ရှင်မှာလဲ အကျုံးမဝင်တော့ပါတဲ့ ဟုတ်ပြီ ဒီအချက်၂ချက်ကို ကျမအဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းလို့မရတော့ဘူးလား ဆိုတော့ ရှေ့နေငှါးပြီးဆောင်ရွက်ကြည့်ပါတဲ့ ဒီကိစ္စပြေလည်ရင်ရပြီလားဆိုတော့ driver က အာမခံစာရွက်ထဲမှာ ရေးထားတဲ့နာမည်မဟုတ်ရင် အကျုံးမဝင်ပါတဲ့
အလုံးစုံအာမခံထားထားတဲ့ ကားတစ်စီး အာမခံသက်တမ်းလဲကျန်ရှိသေးရက်နဲ့ အာမခံကုမပ္မဏီဘက်မှ တချက်မဟုတ်တချက် ပြစ်ချက်တွေ အားနည်းချက်တွေရှာပြီး အကျိုးခံစားခွင့် တစွန်းတစမျှပင် မရခဲ့ပါဘူး customer ရဲ့အကျိုးကိုရှေးရှုပြီးလုပ်ဆောင်နေပါတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ ဘာ့ကြောင့်သုံးခဲ့ကြတာလဲ ၁ သိန်း ၂ သိန်း ဆုံးရှုံးမှုလောက်ပဲဆိုရင်တော့ customer ကိုကျေနပ်အောင် လျော်ပေးကြပေမယ့် အခုလို သိန်း ရာချီဆုံးရှုံးမှုမျိုးမှာတော့ အာမခံကုမ္ပဏီ၏ အရှောင်အတိမ်းအကွက်များကြား customer မှာ မျက်နှာငယ်စွာဖြင့် ငုတ်တုတ်မေ့ခဲ့ရပါပြီ
ဟုတ်ကဲ့ ကျမ လက်လျော့လိုက်ပါပြီ ကျမကို အခုလိုသင်ခန်းစာပေးတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ လိုင်းထဲ့ထားတဲ့ အံစာတုံးတွေကို IKBZ မှာထားဖို့ ကျမတို့plan ထားတာပါ အခုလို အချိန်မှီသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ မဟုတ်ရင် ၁စီးကို ၃၈၅၀၀၀ နဲ့ အာမခံကြေးသွင်းမိတော့မှာပါ ခုတော့ သက်သာသွားတာပေါ့
တကယ့်တကယ်ဖြစ်လာရင် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပဲဆိုတဲ့ အသိကလေးသွင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ Accident ကပြင်းထန်လွန်းခဲ့သော်လည်း Air bag ၂ လုံးပွင့်ခဲ့လို့ ကျမတို့ မသေခဲ့တာပါ။ အခုတော့ ဒီကားလေးကို ဝဋ်ကြွေးတခုကျေအောင် ပေးဆပ်လိုက်ရတယ်လို့ပဲ ခံယူလိုက်ပါပြီ။
အလုံးစုံကားအာမခံကုမ်ပဏီတှေ အပွောလေးတှသေိပျကောငျးကွတယျ အာမခံကို မထားထားခငျြအောငျ အမြိုးမြိုးစကားလုံးတှရှေေးပွီးပွောကွတယျ ကားတစီးလုံး ဘယျလိုအခွအေနေ ဘယျလောကျအတိုငျးအတာထိပကျြစီးပကျြစီး customer ဘကျမှ ဘာမှအာရုံမနောကျရ ဘာမှမနဈနာရအောငျ စီစဉျပေးသတဲ့ အပကျြအစီးတအားဆိုးသှားရငျ တစီးလုံးတနျဖိုးပေါကျဈေးအတိုငျး ပွနျလြျောပေးမညျတဲ့ ကွားရတဲ့စကားလေးတှအေားရှိစရာပဲ ဒီလိုစကားလေးတှကွေောငျ့လဲ customer ဘကျက တနှဈကို အာမခံကွေး ၃၈၅၀၀၀ ပေးနရေလဲ ပြျောပြျောပဲ ၁နှဈကို ၁၃၆၀၀၀ ပေးနရေခွငျးအတှကျလဲကကြေနြေပျနပျပဲ ပေးတယျလေ accident ဆိုတာအခြိနျမရှေးဖွဈနိုငျတယျ ဖွဈရငျကိုယျ့ဘကျက နဈနာမှုမရှိအောငျ သူတို့အားလုံးလုပျပေးမှာလေ ယုံတယျလေ အပွောလေးတှကေလဲကောငျးကွတာကို
IKBZ မှာ အလုံးစုံကားအာမခံကွေးသှငျးထားသော ကားတစီးကို ကမြဝယျပွီး ၁ လအကွာမှာ ကားaccident ဖွဈပွီး ကားက သုံးစားမရအောငျစုတျပွတျသတျသှားပါတယျ အာမခံသကျတမျးကကနျြသေးတဲ့အတှကျ အာမခံကုမ်ပဏီကို အကွောငျးကွားတဲ့အခါမှာတော့ သူတိျု့ဘကျက မလြျောရဖို့အရေး ရှောငျလငျကှနျဖူးထကျပငျအရှောငျအတိမျးကောငျးလှသော သိုငျးကှကျမြားကပွကွပါတယျ ၁ ပတျအတှငျးအကွောငျးကွားတာမဟုတျလို့ အကြုံးမဝငျပါလို့ပွောပါတယျ။
ကမြတို့မှာ accident ဖွဈခြိနျ လငျမယား ၂ယောကျလုံး ဆေးရုံရောကျသှားတယျ နံရိုးကြိုးတော့ ခရီးမထှကျနိုငျဘူး အာမခံစာရှကျတှကေ ရနျကုနျမှာကနျြခဲ့တယျ ဒါ့ကွောငျ့ အခြိနျမှီအကွောငျးကွားရနျပကျြကှကျခဲ့မိကွောငျးရှငျးပွခဲ့ပါတယျ ဒါဆို အသနားခံစာတငျပါတဲ့ ဒါပမေယျ့ ပေးမယျလို့တော့အာမမခံပါတဲ့။
ဒီအခကျြကိုအဆငျပွအေောငျညှိနှိုငျးရငျရပွီလားလို့မေးတော့ မရသေးပါတဲ့ အာမခံထားတဲ့လူနာမညျက အရငျလူနာမညျဖွဈနလေို့ နောကျဝယျတဲ့လူက နာမညျမပွောငျးရသေးလို့ အကြုံးမဝငျပါတဲ့ ဟာ မဟုတျသေးဘူးလေ အာမခံသကျတမျးကနျြနသေေးလို့ကမြမပွောငျးသေးတာလေ ဒီလိုပျေါလစီရှိတာကမြတို့မသိလို့မပွောငျးခဲ့တာ ကောငျးပွီ ဒါဆို မူရငျးပိုငျရှငျကိုဆောငျရှကျခိုငျးလိုကျမယျ ဖွဈမလားဆိုတော့ အဲ့လိုလဲမရပါတဲ့
ရောငျးလိုကျပွီးသားပစ်စညျးအတှကျ မူရငျးပိုငျရှငျမှာလဲ အကြုံးမဝငျတော့ပါတဲ့ ဟုတျပွီ ဒီအခကျြ၂ခကျြကို ကမြအဆငျပွအေောငျညှိနှိုငျးလို့မရတော့ဘူးလား ဆိုတော့ ရှနေ့ငှေါးပွီးဆောငျရှကျကွညျ့ပါတဲ့ ဒီကိစ်စပွလေညျရငျရပွီလားဆိုတော့ driver က အာမခံစာရှကျထဲမှာ ရေးထားတဲ့နာမညျမဟုတျရငျ အကြုံးမဝငျပါတဲ့
အလုံးစုံအာမခံထားထားတဲ့ ကားတဈစီး အာမခံသကျတမျးလဲကနျြရှိသေးရကျနဲ့ အာမခံကုမပ်မဏီဘကျမှ တခကျြမဟုတျတခကျြ ပွဈခကျြတှေ အားနညျးခကျြတှရှောပွီး အကြိုးခံစားခှငျ့ တစှနျးတစမြှပငျ မရခဲ့ပါဘူး customer ရဲ့အကြိုးကိုရှေးရှုပွီးလုပျဆောငျနပေါတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးတှေ ဘာ့ကွောငျ့သုံးခဲ့ကွတာလဲ ၁ သိနျး ၂ သိနျး ဆုံးရှုံးမှုလောကျပဲဆိုရငျတော့ customer ကိုကနြေပျအောငျ လြျောပေးကွပမေယျ့ အခုလို သိနျး ရာခြီဆုံးရှုံးမှုမြိုးမှာတော့ အာမခံကုမ်ပဏီ၏ အရှောငျအတိမျးအကှကျမြားကွား customer မှာ မကျြနှာငယျစှာဖွငျ့ ငုတျတုတျမခေဲ့ရပါပွီ
ဟုတျကဲ့ ကမြ လကျလြော့လိုကျပါပွီ ကမြကို အခုလိုသငျခနျးစာပေးတဲ့အတှကျလဲ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ လိုငျးထဲ့ထားတဲ့ အံစာတုံးတှကေို IKBZ မှာထားဖို့ ကမြတို့plan ထားတာပါ အခုလို အခြိနျမှီသိလိုကျရတဲ့အတှကျကြေးဇူးပါ မဟုတျရငျ ၁စီးကို ၃၈၅၀၀၀ နဲ့ အာမခံကွေးသှငျးမိတော့မှာပါ ခုတော့ သကျသာသှားတာပေါ့
တကယျ့တကယျဖွဈလာရငျ ကိုယျဖွဈကိုယျခံပဲဆိုတဲ့ အသိကလေးသှငျးပေးတဲ့အတှကျကြေးဇူးပါ။ Accident ကပွငျးထနျလှနျးခဲ့သျောလညျး Air bag ၂ လုံးပှငျ့ခဲ့လို့ ကမြတို့ မသခေဲ့တာပါ။ အခုတော့ ဒီကားလေးကို ဝဋျကွှေးတခုကအြေောငျ ပေးဆပျလိုကျရတယျလို့ပဲ ခံယူလိုကျပါပွီ။ Cherry
အကြောထုံး၊ အကြောတင်၊ အဆစ်ရောင်ခြင်းတို့ အတွက် ဆေးစွမ်းကောင်းများ – တောရဲယို…!
ကြက်သွန်ဖြူ မီးဖုတ် (သို့) မီးကင်ပြီးစားသုံးပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ…!
Users Today : 1938
This Month : 33400
This Year : 174857
Total Users : 533881
Total views : 2414790